RPCS3: kufambira mberi kutsva mu PlayStation 3 emulator yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
RPCS3 Icho chirongwa chikuru chekugadzira yakakura Sony mutambo wekhoni emulator Dreamcast 3 kana PS3 uye zvinoshanda zvakare muGNU / Linux. Dare rekuvandudza rinotarisira software iyi rakatoita nhanho huru dzekuenderera mberi nekuvandudza chirongwa ichi, uye pakati pavo tinoziva mazita emitambo yemavhidhiyo mitsva yatinogona kumhanya pasina dambudziko muchirongwa ichi. Ese ari ikozvino 100% anotamba kubva ku distro yako kana iwe ukaisa iyi package.
Pakati pemitambo yemavhidhiyo iyo RPCS3 emulator inogona kumhanya yatove anopfuura 1119 mitambo yemavhidhiyo, runyorwa rukuru. Uku ndiko kusvetuka kukuru kana tichifunga kuti mwedzi wapfuura chete 1081 yaigona kutambidzwa, nokudaro, gumi nemaviri emitambo yemavhidhiyo yakawedzerwa munguva pfupi. Izvo zvinopa pfungwa yebasa rakakura iro vavaki varo vanoramba vachiita kuitira kuti tigone kunakidzwa nekunakidzwa kwakanyanya papuratifomu yedu yatinofarira.
Kana iwe uchinetseka kuti ndeapi mavhidhiyo emitambo ari pane iwo akawandisa runyorwa, saka une mamwe akaita seSiketi 3, Hapasisina Magamba: Magamba'Paradies, Ragnarok Odyssey Ace, Ni no Kuni: Hasha dzeWhite Witch, uye yakareba etc. Zvakare, sezvaungaona mumufananidzo mukuru wechinyorwa chino, uye kana uri fan guru resaga Dragon Ball, kana Dhiragoni Bhora, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe uchave unokwanisa kunakirwa huru yevhidhiyo mutambo Dhiraini Bhora Z: Hondo yeZ kuti inounza iyi huru saga naAkira Toriyama kune iyo digital nyika.
Asi mazita akawedzerwa handiyo chete chinhu chitsva muRPCS3 iyi, isu tinayo zvakare kumwe kugadzirisa pamusoro pekodhi kana software pachayo, senge zvimwe zvinhu zvitsva zvakawedzerwa. Pakati pavo, kodhi yakagadziridzwa kuti ikurumidze kukurumidza. Semuenzaniso, Red Dead Redemption inoenda kubva pamaminetsi gumi nemaviri kubhadharisa kusvika paminiti imwe chete izvozvi. Saizvozvowo, zvimwe zvinhu zvakashandurwa, senge kuvandudzika kwemifananidzo, FBO uye zvimwe zvipembenene zvakatogadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » RPCS3: kufambira mberi kutsva mu PlayStation 3 emulator yeLinux